Ogaden News Agency (ONA) – Raisal-wasaaraha Kenya Raila Odinga oo amar ku siiyay ciidamadiisa
Raisal-wasaaraha Kenya Raila Odinga oo amar ku siiyay ciidamadiisa
Wargayska –The Star – ee ka soo baxa dalka Kenya ayaa sheegay in ciidamada qalabka sida ee dalka Kenya amar lagu siiyay inay ka eryaan 2,500 oo qabiilka loo yaqaano Merille oo Itobiya ah oo weeraro ku hayay dadka shacabka ah ee xuduuda 2da dal u dhexeysa daga.
Waxuu sheegay wargayska in dawladda Itobiya la wargaliyay inay dadkaa dib uga raraan dalka Kenya hadii kale si qasab ah looga saari doono. Waxaa lagu eedeynayaa in ugu yaraan dad gaaraya 40 qof oo Kenya ah ay dileen Itobiyaanka oo duulaan ku soo qaaday laba todobaad ka hor dadkii shacabka ahaa ee halkaa daganaa.
Shalay ayuu RW Kenya Mr. Odinga u sheegay baarlamaanka in guddi hoosaadkii uu gudoominayay Madaxwene Kibaki oo kulmay Talaadadii ay siiyeen ciidanka amarka ah inay si qasab ah ku raraan qabiilka Merille hadday si kale ku bixi waayaan, arintaa oo loo sheegay ayuu yidhi Mr. Odinga Mariilehii soo galay Kenya.
Wuxuu intaa ku daray RW Odinka in qabiilkan ay hubaysan yihiin badankooda ayna ka soo gudbeen xadka oo ilaa 17 Km ay gudaha Kenya ugu jiraan iyagoo ka qaatey dhulkoodii qabiilka Turkaana ee daga balliga Turkana.
Wuxuu RW Odinga ku eedeeyay arintan ciidamada qalabka sida ee Kenya oo uu sheegay in aanay arintan waxba ka qaban inkastoo malaayiin lacag ah lagu bixiyo hubkooda iyo mushaharka la siiyo. Wuxuu intaa ku daray in kor loo qaadi doono tababarka booliiska loo yaqaano Todonyang oo goobahaa la gayn doono.
Itobiya ayaa waxay aad ugu caan baxday inay dawladaha dariska la’ah marwalba ka dhex shido qalaalse iyadoo qabiilada isku hubaysa. Waxayna falalka noocan ah samaysaa marka ay doonayso inay culays saarto dawladaa dariska la’ah si ay uga hesho tanaasulaad siyaasi ah. Waxaa ka horeeyay isku dhacan midkii ay ku soo qaadeen xadka Mandheeraa oy ku laayeen qaar ka mid ahaa booliiska Kenya.
wuu ku sugay, mar hore ayaase loo baahnaa tan oo kale